पिसिएल ड्राफ्टमा सन्दीप मंहगो श्रेणीमा परे, छनोट होलान ? - Vishwanews.com
पिसिएल ड्राफ्टमा सन्दीप मंहगो श्रेणीमा परे, छनोट होलान ?
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग (पिसिएल) को आगामी संस्करणका लागि ड्राफ्टमा पर्न सफल भएका छन् । यस पटक उनको नाम सबैभन्दा बढी मूल्यका खेलाडीको श्रेणीमा छन् । यस वर्गमा विश्वस्तरीय खेलाडीहरु क्रिस गेल, मोइन अली, कोलिन इन्ग्राम, इमरान ताहिर, मलान, क्रिस लिन, रासिद खान, मुजीव उर रहमान समेत छन् ।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डका अनुसार ड्राफ्टमा सन्दिप सहित पाकिस्तान र अन्य देशका गरी कुल ३ सय खेलाडी रहेका छन् । जनवरी ९ मा खेलाडीहरुको लिलामी हुनेछ । सार्वजनिक गरिएको ड्राफ्टमा प्लेटीनीएम, डाईमण्ड, गोल्ड, सील्भर र ईमरजीङ प्लेयर गरी कुल ५ श्रेणी रहेका छन् । सन्दीप सबैभन्दा महंगा खेलाडीको सूचिमा हटाएका छन् ।
यस लीगमा केटा ग्याडियर्टस, लाहोर कलन्दर्स, मुल्तान सुल्तान, इस्लामबाद युनाइटेड, पेशवार जाल्मी र कराँची किङ्स गरि ६ फ्रेन्चाइज टोली खेल्दैछन् । प्लेटीनम श्रेणीमा अटाएका खेलाडीलाई कुनै टिमले १ लाख १७ हजार अमेरीकी डलरदेखि २ लाख १८ हजार अमेरीकी डलर सम्म किन्न सक्नेछन् । अर्थात सन्दीप छनोट भए भने कम्तिमा सवा करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यो लिगमा सन्दीप सन् २०१८ मा लाहोर कलन्दर्सबाट खेलेका थिए ।
Editor - Samjhana Khanal